Itoophiyaan kunoo amma bulchaa isii male argatte jedha Miseensii Kongireesii US, Chris Smith miilota isaa waliin Itoophiyaa dhaqee gale
Fulbaana 14, 2018
Itoophiyaan kunoo ammaan tana bulchaa isii male argatte jedha miseensii Kongireesii US Chris Smith dhiyoo achii gale
Chris Smith,mana marii Amerikaatti itti gaafatamaa koree haajaa alaa US. Bara dargiitii asi siyaasaa Itoophiyaa faanuma jira.
Dhiyoo tanallee miilota isaa nama akka Karen Bass(D-CA) fa walii akka siyaasaan Itoophiyaa itti deemuutti jiru laalanii bulchootalleen wal dubbachuuf achi dhaqan.
Muummee ministeraa,ijaaoollee dargaggoo, abbootii amantii, abbootii siyaasaatii fi nama hedduun wal haashan.
Waan araganii fi nama irrallee dhagahan Fulbaana 12,2018 miseensota isaanii, bakka buutota hawaasa Itoophiyaatii fi nama hedduu galama walgahii senetii US keessatti yaamanii itti himani ufillee caqasan.
Warra kalee dhufee waan Itoophiyaan keessa jirtu dubbate keessaa miseensa Kongireesii US,Mike Koffan,itti aanaa itti gaafatmaa haajaa alaa US damee Afrikaa, ambaasaaddor Tiboor Naajii fi nama hedduutti itti dhufe.
Smith akkana jedha “Muummeen Minsiteraa eegii itti gaafatama kana fudhatee waan hedudu seerii wixinee US baase H.Res.128 gaafatu hedduu jijjiire.Nama kuma hedduu hidhaa yaase. Seera muddamsuu biyyitii baafatte hujii irraa kaase.Nama Itoophiyaa biyya alaa jiru hedduun wal arge.”
Miseensii Kongireesii US kun Dr.Abiy Ahmed hariyummaa Itoophiyaatii fi Eeritraa deebise jedhee galateeffate.
“Itoophiyaa fi Eertiraallee walti araarse.Hujiin isaa tun biyya abbaa irree Eeritaalleen akka isiin ufi laaltu tolchite.Biyya namii isii kumii kurnya hedduu itti hidhamellee akka isiin ufi laaltu tolche. Jara kana keessaa lama hojjatoota Embaasii US Eeritiraa keessa hojjatan.Kaan nama lammii Eeritaa Amerikaa jiru. Isiilleen yoo akkanaan deemte hariyaa jabduu Amerikaa taati.”
Miseensotii kongireesii US waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaatiin wal mari’atan.
Congressman Chris Smith filannoo Itoophiyaa 2005 asi siyaasaa Itoophiyaa jalaa hin deebine
“Wannii guddoon ani arge qalbii guddoo jijjiirama barbaadduu fi abdii jijjiiramaati. Ani qalbii akkanaa takkuma Itoophiyaa keessatti hin agarre.Waan ji’a diqqaa keessatti hojjate kanaaf muummeen minsitera galata argachuu male.”
Taatullee jijjiiramii biyyitii keessa jirtuu walumatti aanuu malle jedha.
“Fkn seerii jara NGO-tiin jedhanii baasan seerii jara biyya nagaa dhowwuun tohatan jedhanii baasan ammallee fuluma ufii jira. Warrii seera malee hidhamee waan hamtuu tolchu dhugaa fedha.Wannii warrii mana hidhaa keessatti ulee hamaamtuu dhaanan waan afaaniin dubbachuu dandahahii miti.”
Akka Congressman Smith faatii jedhanitti nama miliyoona 2 fi kuma 500tti Itoophiyaa keessaa baqte.
“Namii baqatee qahee ufiitti galuu male.Qeesiin amantii Kaatolikii Abraaham Destaa Itoophiyaa damee Maqii nama miliyoona 2 fi kuma 500 caalaatti biyya keessa baqatee jedhee natti hime. Jarii gargaarsa fedha.”
Akka Smith jedhutti namii hujii fedha,akka jijjiiramii lafatti mullatu fedha guddachuu fedha.
Kaaren Baas miseensota mana marii US dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii galan ammallee waan hedduu Itoophiyaa keessatti arguu fedhan.
“Fkn nagaa naannoo eeguu irratti. Rakko mirga namaa Itoophiyaan keessa dabarrte. Rakkoolee gosa jidduu jirtu. Itti gaafatmtoota EPRDF ka karaa ufii qofa fedhan.Nu akka Amerikaatti biyya tana akkamiin durttiin deemaan fala nu itti jirru keessaa tokko.”
Walumattuu yoo deebisan hujiin muummeen minsitera hojjachuutti akka miseensotii kongireesii Amerikaa jedhanitti waan akka malee nama jabeeaati.
“Nama jijjiiramaan deemuutti jiru argee wal dubbanne. Muummeen minsiteraa kuniin nama biyyitii feetii ka satii rakkootti biyya tanatti dhufe.Tanaafuu gargaarsa keennatti maleef.”